Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အစားအစာ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အစားအစာ
သင်ဟာ Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား??? သူဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးအစားအစာဖြစ်တယ်ဆိုတာရော သင်သိပါသလား???
လူအများစုက ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းလို့ခေါ်တဲ့ ( Broccoli ) ကိုသင်ဟာ ကျက်နေအောင် ပြုတ်စားမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့သွေးတွင်း cholesterol ကို အများဆုံးလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) ဟာ သင့်ရဲ့ အစာလမ်းကြောင်းထဲ ရောက်ရှိတဲ့ အချိန်မှာ သည်းခြေက ထုတ်ပေးတဲ့ အက်စစ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့လို အက်စစ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့သွေးတွင်း cholesterol ကို လျှော့ချပေးတဲ့ အဓိကအချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) ဟာ ကိုယ်တွင်းကအဆိပ်ဓာတ်တွေကို လျှော့ချပေးတဲ့နေရာမှာလည်း အလွန်အသုံးဝင်လှပါတယ်။ Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ glucose ဒြပ်ပေါင်းသုံးမျိုးဟာ လူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားခြင်း ၊ အာဟာရပြုခြင်း ၊ အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်း စတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်လုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ မလိုအပ်တဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ရှင်းထုတ်နိူင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) ဟာ ဗီတာမင် D အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ဟန့်တားပေးနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဗီတာမင် D အများဆုံးပါဝင်တဲ့ အစားအစာကိုပြပါလို့ဆိုရင် Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) ကို လက်ညှိုးညွှန်ရပါလိမ့်မယ်။
လတ်တလော သုတေသနပြုချက်တွေအရ Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) မှာပါဝင်တဲ့ kaempferol လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးဟာ မိမိကိုယ်တွင်းမှာ ဓာတ်မတည့်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ သုတေသနပြုချက်တွေအရ ကလေးအများစုဟာ Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Broccoli ( ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) နွမ်းနေအောင်ကြော်ခြင်းဟာ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရရော အရသာပါ ဆုံးရှုံးစေနိုင်လို့ ခပ်စိမ်းစိမ်းကြော်စားတာက ပိုသင့်တော်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါသေးတယ်။